जाभी बार्सिलोनाका मुख्य प्रशिक्षक, आज घोषणा हुँदै !
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलजाभी बार्सिलोनाका मुख्य प्रशिक्षक, आज घोषणा हुँदै !
एजेन्सी, २७ पुस । बार्सिलोनाले आफ्ना पूर्वस्टार जाभी हर्नान्डेजलाई मुख्य प्रशिक्षक बनेको कतारी फुटबलर खालेड वालिडले जानकारी दिएका छन् । उनले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमा एक ट्वीट गर्दै बार्सिलोनाले पूवस्टार जाभीलाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको जनाएका हुन् ।
बार्सिलोनाले कतार स्टार्स लिग क्लब अल–स्याडका म्यानेजर रहेका जाभीलाई प्रशिक्षक बनाउन चाहेको बताइएको थियो । यसका लागि बार्सिलोनाका प्रमुख कार्यकारी ओस्कार ग्राउ र टेक्निकल सेक्रेटरी इरिक अबिडाल जाभीसँग भेट गर्न शुक्रबार दोहा पुगेका थिए ।
जाभीलाई अघिल्ला दुई पूरा सिजन प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिने भन्दै यस बैठकका लागि केही समयअघि योजना बनाइएको थियो । ‘आरएसी वान’को रिपोर्टअनुसार गाउ, अभिडाल र जाभीबीच दोहामा बैठक भएको थियो । जसमा जाभीलाई बार्सिलोनाको प्रशिक्षकमा प्रस्ताव राखिएको थियो ।
यी दुई पक्षबीच सहमति मिलेको र जाभीलाई बार्सिलोनाले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिएको वालिडको दाबी छ । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘जाभी अब बार्सिलानाका कोच बनेका छन् । आइतबार यसबारे पूरा जानकारी घोषणा हुनेछ । अल स्याड क्लब जाभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ, जसले हाम्रा लागि काम गरे ।’
वर्तमान प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेलाई हटाएर आफ्ना पूर्वखेलाडी जाभीलाई प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गर्ने बार्सिलोनाको इच्छा छ ।